Olole Nadaafadeed oo ka Biloowday Magaalada Caabudwaaq (sawirro) – Radio Daljir
Olole Nadaafadeed oo ka Biloowday Magaalada Caabudwaaq (sawirro)
May 25, 2017 4:05 g 2
Caabudwaaq – Degmada Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka socday olale xagga nadaafadda iyo bilicsamida magaalada la xiriira, kaasoo lagu aruurinayo qashinka magaalada dhaxdeeda iyo bannaannada aan durugsanayn yaalla.
Olalahaan nadaafadeed ee Caabudwaaq, waxaa ku hawllan dhallinyaro iskooda isku xilqaantay, iskuguna jira wiilal iyo gabdhaba, kuwaasi oo badankoodu ah arday dhigata Jaamacadda Galgaduud ee ku taalla degmada cWaaq.
Dhallinyaradaasi oo ku gudaha jira shaqada nadaafadeed ee qashin aruurinta ah oo uu la kulmay Radio Daljir, ayaa noo sheegay ujeeddada ugu weyn ee ay olalahaan ka leeyihiin in ay tahay dhawrista caafimaadka dadka iyo deegaanka degmada Caabudwaaq, gaar ahaan si looga baaqsado cudurrada xilliyada roobka ka dhasha qashin iyo wasakhda taalla waddooyinka magaalada iyo hareeraheeda.
Dhinaca kale waxaa jira hadal hayn ku saabsan in magaalada Caabudwaaq dhawaan uu ku soo foolleeyahay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdillahi Farmaajo iyo wafti uu hoggaaminayo, tallaabada qashin aruurinna ay u tahay gogol xaar imaatinkiisa, inkasta oo da’yarta shaqadaas isku xilqaamay ay meesha ka saareen in olalahoodu la xiriiro u diyaar garowga imaanshaha madaxweynaha.
cWaaq, ayaa ka mid ah meelaha xanuunka shubanku uu ka dillaacay, dadka badanna ay u jiifaan goobaha caafimaadka, shubankaasi oo sababay dhimasho carruureed, waxaana inta badan loo tiriyaa imaatinka xanuunka shubanka in uu ka soo unkamo qashinka iyo nadaafad xumada.
Dowladda Soomaaliya oo Mar kale ku Dhawaaqday Dagaal ka dhan ah Alshabab (dhegayso)
Ololaha Bilicaynta Dalka oo Muqdisho Laga Daahfuray (Sawirro)
bishaaro 1 year
radio daljir waa warbaahin qiimo iyo qadarin naga mudan
waxeyna mar walba utaagantahay wacyigalinta bulshada iyo dib udhiska wadankeena
waana warbaahin utagaan ineey dhageysatayaasheeda ugudbiso warar tifaftiran waana u bogey aniga shakhsi ahaan allaha la jiro radio daljir
Xabiiba Ayanle 1 year
Ceebtiina iyo dayiciina dadka halawadaagina